Samarbejde_Somali by Gitte Tollund Pedersen - issuu
Wadashaqayn iyo Yididiilo oo u dhaxeysa dugsiga iyo guriga
Masuuliyadda waalidka iyo kusoo daridda waalidka
Waalidka qaaliga ahoow
Buuggan yar waa in loo arkaa inuu gacan ka geysanayo doodan, sidii waalidka iyo dugsiga iyadoo wada shaqeynaya, waxay labadu awoodaan ku dhaganaadaan siina wadaan horumarka dugsiga, sii socoshada arrinta waxay ku tusinaysaa soo bandhigid wanaag iyo waxbarid wada socda iyagoo gacanta is haysta. Halkaasoo waalidka iyo macalimiintu 2
midkasta aqoontiisa iyo fahamku wadajirka u abuurayo ardayda deegaanka Odense xad go’aan kan ugu wanaagsan. Buuggan yar wuxuu u shaqeenayaa sidii dood furan in lagu qaadaadhigo maamulka dugsiga, xiriirka qaabilaada waalidka iyo lakulanka waalidka. Taasi waxay ka kooban tahay dhowr wadiiqo oo wax lagu xalliyo iyo laba daran mid dooro, taasoo abuuri karta barta bilowga ee faaqidaadda. Ujeedadu ma ahan in qofku helo jawaab aan mugdi ku jirin og gabagabada buuggan yar. Arrimahaasi iyadoo la eegayo aasaaska hoose wey ku kala duwan yihiin min dugsi ilaa dugsi. Intaas waxaa dheer buuggan yar dugsi kasta wuxuu qaadan doono go’aan la xiriira yididiilada. Buuggan yar wuxuu wataa buug, kaasoo qeexaya bundhigga la xiriira fursadaha iyo dhibaatooyinka dhexyaala wadashaqeynta dugsiga iyo guriga. Buuggani wuxuu noqon doonaa qalab fiican oo loo adeegsato falanqaynta iskuxirnaanshada iyo maamulka dugsiga, halkaas xoog la saarayo wadashaqeynta guriga. Waxaan rajaynaynaa in waxyaalahan ay noqon karaan qalab ama fikrad helin la xiriirta waxyaalahan, taasoo hoos Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem ahaan noqon karta walax ama cunsur saameyn leh oo hoogeeya wadashaqeynta meelmeed ee dugsiga iyo guriga. Forældreansvar og forældreinddragelse
Jane Jegind La-taliye Hæfte
Wadashaqeynta u dhaxeysa dugsiga iyo guriga waa wax muhiim, mincnana ugu fadhiga canuga nolashiisa. sida waqtiga uu dugsiga dhiganayo. Waalid badan ayaa taageera shaqada uu hayo dugsiga, lakiin shaki ka qaba sida ugu wanaagsan ay shaqada u qabanayaan. Waa in ay jirta aqoon iyo isfahan yididiilo wadaag. Waxaa muhiim ah horumarka ardayga qof ahaan iyo waxbarasho ahaan, waalidkuna waxay danaynayaan caruurta waxbarashadooda, iyo inuu si firfircooni ah ugu qaybgalo shaqada dugsiga. Wadashaqayntu waa iney ku dhisnaataa wada hadal qiimo leh oo u dhaxeeya dugsiga iyo waalidka iyadoo labada dhinac ay is dhageysanayaan, tixgelinayaanah ra’yiga labada dhinac. Waxaan rajaynayaa idinka waalid ahaan inaad qaadaan masuuliyad ahaan in canugu yimaado dugsiga asagoo u diyaarsan inuu fahdo nidaamka waxbaridda iyo isagoo soo nastay, haystana quraac tayo leh. Idinku waalid ahaan waxaad filaysaan in canugiinna qaabilaan shaqaale barbaariyaal ah oo aqoon sare u leh barbaarinta oo u diyaarsan qaabilaadiisa. Bii’ad wanaagsan ee waxbaridda ee cariirta waxay xambaarsan tahay wadashaqayn mira dhal ah una dhaxeysa dugsiga iyo guriga, wadashaqeyntaas waxay qayb ka tahay iney ku abuurto fasalka bii’a xasilan oo amaan leh iyo waayo aragnimo wadaah ee macalimiinta, ardayda iyo waalidka.
Laga soo minguuriyay habdhaqanka caruuta iyo dhalinlyada ee Degaanka Odense
Hafad, Aasaas qiimo leh iyo ujeeddo Aasaas qiimo leh Habdhaqanka deegaanka Odense og qaybta maamulka caruurta iyo dhalinlyada waxaa aasaasx qiimo leh u ah dhaqanka iyo hiddaha daanishka. Waxyaaha ay qiimeeyaan bulshada daanisha oo ayna ixtiraamaan waxaa mid ah dhaqanka dadka kale. Shaqada qaybta maamulka caruurta iyo dhalinyadu waxay ku dhisan tahay: ● Horimarinta caruurta ee isqiimeyta iyo dareemid isaqoonsi ● Lawadaaga go’aanka iyo lawadaaga mas’uuliyadda ● Ixtiraam canug kasta oo leh wax gaar ahaaneed oo uu kaga kuwan yahay dadka kale iyo baahi
Tartan iyo iska ushaqaysi Amaan, xannaano og nolol caafimaad qabta Wadasinaan shaqo Kuwaajibid wadajir og caruurta awoodooda iney dhaxgalaan bulshada iskxirnaanteeda ● Waa mas’uuliyadda waalidka iney noqdaan qofka ugu muhiinsan nolasha caruurta
● Danta caruurta waa muhiim, haddii ay timaado dano iska hor-imaanaya iyo mushkilad ee xaaladda ku saabsan caruurta iyo dhalinyada ➔4
Muxuu leeyahay sharcigu? §1.farqadda 1. Dugsiga aasaasiga ah waa waajib iney la shaqeeyaan waalidka, iney caruurta siiyaan aqoon iyo karti taasoo ayaga u diyaarineysa iney sii wataan waxbarashadooda, siiyaanna hammi ay wax ku sii bartaan si u ogaadaan dhaqanka iyo taarikhda daanishka, iney siiyaan faham dalaka kale iyo dhaqankooda, iney gacan ka geystaan iney fahmaan isdhexgalka dabeecadda iyo horumariyaan dhinac walba ee arday kasta. §2.farqadda 3. Ardaydu iyo waalidka waa iney la wadashaqeéyaan dugsiga si laa jaan qaadi karta hadafka dugsiga aasaasiga ah.
Marka laga reebo gundhiga dhexe ee hadafka, taas uguma taalo sharciga mowduucd ku saabsan sida wada shaqaeynta dugsiga iyo gurigaIntaas waxaa dheer, xadka gunddhiga la qeexay ee, waxaa jira dhowr xad ee deegaanka, taaso u baahan in la tixgeliyo. Guddiga deegaanku wuxuu meel mariyay habdhaqan caruurta iyo dhalinyada. Habdhaqankan waa mid lagu maamulayo shaqada hoose ee qaybta maamulka caruurta iyo dhalinyada, sidoo waa ku dhaqmaya qaybta dugsiga. Waxaa la dhici karaa waa mabda’a dugsiga ee la xiriirta wadashaqeyn dugsiga iyo guriga taasoo waajib ah in la tixgeliyo xadka deegaanku qeexay.
Ka qaybgelin waalidka
Waxaa jira xiriir guud ee u dhaxeeya caruurta iyo dhalinyada maalinta kasta. Taasi micnaheedu wuxuu yahay in:
Taas micnaheedu wuxuu yahay in:
● Caruurtu iyo dhalinyada ay leeyihiin isasaameyn arrimaha dhexdhooda ah oo ku saabsan xaaladda iyaga u gaarka ah ● Caruurta, dhalinyada iyo waalidka waxay arkaan isu xirnaanshada iyo dadaalada iska bedella xarun ka xarumo lagu hayo caruurta, xarlun ka xarun maalmeedka caruurta, dugsi ka dugsiga waqtiga firaaqada, dugsi ka dugsi tacliinta dhalinyada ● Caruurta iyo dhalinyada waxay arkaan ixtiraam iyo wadashaqeyn u dhaxeysa dadka muhiimka u ah nolashooda sida waalidka iyo dadka kala shaqeeya nolashooda ● Canug iyo dhalinyaro kasta waxa aasaas u ah markahoreba hawsha qaybta qabato qaybta maamulka caruurta iyo dhalinyada ● Waxaa jira ka foojignaan gaar ah oo lagu taagerayo baahida caruurta iyo dhalinyada u gaarka ah
Waxa laga filayo Waalidka Waxaa laga filayaa waaladku iney aqoonsadaan iney leehiyiin mas’uuliyadda kowaad ee edbinta caruurtooda, horumarkooda, bulaanlintooda iyo wanaagooda. Taas micnahooda waxay tahay in: ● Waalidku firfircoon yahay, wadashaqeyn leh oo la xiriirta horumarka iyo wanaagga carurrutooda ● Waalidku waa inuu taageera kana qayb galaa kulamada iyo ratibaaka ama festooyinka ay sameeyaan xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo ● Waalidku waa iney ku taageeraan caruurtooda ka qaybgalka majabaxsiga ay sameeyaan xarumaha xanaanada caruurta iyo rixladaha ama meel soo jiifad dugsu soo abaabulo 4
● Waalidku waa inuu leeyahay wadashaqeyn qiimo leh oo u dhiganta tan dadka ay wadashaqeyntu ka dhaxeeyso, waan ineyna kulamada ka qayb galayaan iyadoo si muuqaal ah oo waji furfuran oo daacad leh ● Waalidka waa in taageero laga helaa si loo arko loogana faa’ideysto awooda kaalinta waalidka ● Canuga wanaagiisa caadiga ah waxaa lagala gorfeeyaa waalidka ● Waalidka iyo dadka ay wadashaqeyntu ka dhaxeyso waxay ka doodaan oo ay qeexaan waxa laa rajaynayo wadashaqeynta laba dhinac ● Waalidka iyo dadka ay wada shaqeeyaan waxay ka doodaan horana u mariyaan qaabka wadashaqeynta ● Dadka ay waalidka wada shaqeeyaan waxay xoog gaar ah saaraan iney horumariyaan wadashaqeynta qoyska dhibaatadu haysato iyadoo la tiaxgelinayo ka hortagidii iyo dadaalkii hore
Waxa laga filayo saaxiibada shaqada Caruurta iyo dhalinyaradu waxay la kulmaan saaxiibada shaqada, kuwaasoo la jooga dad ahaan iyo shaqaale ahaan. Taasi micnaheedu waxay tahay in: ● Saaxiibadu shaqadu iney gacan ka geystan fursadaha horumarka leh ee imaan kara ee dhiirin gelin kara caruurta ● Saaxiibadu shaqaeu iney gacan ka geystaan iney abuuraan xiriir joogta ah ee u dhaxeeya caruurta dhexdooda iyo caruurta iyo dadka waaweyn ● Saxaabadu shaqada ay ka dhaxeesyo wadashaqaynta kooxda waxbaridda iyo kooxda dadaalka wada ● Saaxiibada shaqadu waa iney feejignaadaan o o wax ka qabtaan markii ay la kulmaan caruurta o o ay caawiyaan kuwa u baahan cawimaad ● Saaxiibada shaqadu waa iney gacan ka geystaan in laga hortago mashaakillada iyagoo taageeraya talabixinta iyo dadaaladii hore loo sameeyay ● Saaxiibada shaqadu waxay ku howlan yihiin xarunta shaqada sidoo kale waxay ku hawlan yihiin waxbarid iyo tixgelin bulsho
Laga soo minguuriyay habdhaqanka Deegaanka Odense ee caruurta iyo dhalinyada
Qayb habdhaqan – Dugsiga aasaasoga ah Ujeeddo
Ardeydu waxay helaan baratan mid waxbarid iyo mid bulsho, tasoo gacan ka geysata horumarka qof ahaan dhinacyo badan, waxayna isku diyaariyaan iney noqdaan muwaadin firfircoon oo iscaawiya oo la nool bulsho demoqraadi ah oo caalami ah. Taas micnaheedu waxay tahay in:
Dugsiga iyo guriga waa u caddahay mas’uuliyadda wadajirka ah ee ka saaraan edbinta, waxbaridda iyo aasaas u dhiggidda. Taas macnaheedu wuxuu yahay in:
● Hawsha waxbarashadu iyo qaybta waqtiga firaaqada waa in la qorsheeyaa lana habeeyaa arday walba shuruudihisa bilowga horeba ● Hawsha waxaa loo qorsheeyaa bilowgaba ixtiraamka qiimaha qofka iyadoo loo fiirinayo kala duwanaanshaha bulsho iyo mid dhaqan ● Iyadoo la eegayo wadashaqeynta ardeyga iyo waalidka waxaasi joogta ah loo qoondeeyaa hadafka cusub eek u aadan horumarka qof ahaan ee ardeyga dhinac kasta ● Wadashaqaynta u dhaxeeysa dugsiga iyo guriga waxay qiimo u leedahay si isle’eg waajibna ku tahay wada dhinac
Arday dugsiga aasaasiga ah
● Dugsigu waa inuu waalidka ka soo qaybgeliyaa waxqabadka dugsiga ● Dugsi walba waa waajib inuu cadddeeyo sidii waalidku macluumaad uga heli lahaa waxqabka iyo sameeynta dugsiga, waxaana ka mid ah la socodka dhigashada dugsiga ● Maamulka dugsiga kaalin muhiim ah ayuu ka ciyaaraa aasaaska iyo joogtaynta wadashaqeynta waalidka ● Maamulka dugsigu wuxuu u diyaarinayaa waalidka mabda’a wada shaqeeynta ● Waalidiinta fasal kasta waxay saaxiibada shaqadu u sameeyaan kulan iyo waajibaadka labada dhinac ah oo ku saabsan la socodka dhigashada ardeyga ee dugsiga Habkan ah ayaa loo arki karaa
Degaanka Odense Habdhaqanka caruurta iyo dhalinyada
Ra’yi, Fikrad ka qaadash Labadaran mid dooro,fursado
Wadashaqeynta fiican 5
Dhammaaan wey yaqaaniin dugsiga iyagoo ka ambaqaadaya waqtiga dugsyaigoodii Maadaama macalimmintu, waalidku iyo awoowayaashu dugsi dhigan jireen sanooyin ka hor. Taas waxay ka duwan aslanba dugsiga manta. Waalid ahaan wey yimaadaan dugsiga idinkoo qabo ra’yiyaal kala duwan iyo yihidiilo kala duwan waxa u fiican iney caruurtiinu ka bartaan dugsiga. Kala duwanaanshadaha ra’yiga waxa qiimaha leh, idinku ka waalid ahaan iyo ka maamul dugsi ahaan iyo macaliminta waxaa muhiim ah inaad abuurtaan isfaham wadajir ah idinkoo u maraya qaabka wadahadalka muxuu yahay dugsi fiican idinkoo ku jira xadka iyo talooyinka ballaraan. Markii ay wadashaqeyntu shaqeeyso, taaso waxay ardeyga siineysaa xaalad ka wanaagsan tii hore ee xagga wanaagga iyo waxbarashada.
Idinku ka waalid ahaan, dabcan waxaa waajib ah inaad sheegtaan ra’yigiina ku aadan dugsiga, lakiin waxaa muhiim ah ineydan shucuur ahaanu muujin caruurtiisa qaladka aad ka qabtaan dugsiga iyagoo maqlaya. Caruurtu waxay noqonayaan kuwa ku jira xaalad aad u adag. Sidaas darted, markasta waxaa ugu fiican inaad dugsiga toos ula xiriirto haddii aad qabto su’aal., dhaliil iyo mushkiladba.
Inta ka hartay buuggayar waxaa loogu tala galay wadahadal ku saabsan wadashaqeynta dugsiga iyo guriga.
Su’aaldo og doodbilaabid u horseedeysa dugsiga iyo guriga wadashaqeyn wanaagsan Sidee ugu wanaagsan ka waalid ahan inaad gacan ka siisaan caruurta dhigashada dugsiga? Fursado cusub ayaa jira in qodku wax iska weyndiin karaa ● Meelahee dugsiga iyo dugsiga waqgtiga firaaqada aysan aysan xil ka saarneyn? ● Sidee ugu wanaagsan ee u taageri kartaan kaa waalad ahaan wadajirta fasalka?
Su’aalo ku ku saabsan cidda edbineysa caruurtiina ma dugsigaa mise waa waalidka ayaa badanaaba doodu tahay? Idinka waalid ahaan dabcan ayaa leh mas’uuliyadda kowaad ee edbinta ama barbaarinta caruurtiina. Waa waajibkiina inaad caruurtiina u labistaan si u awood ugu yeesho xaalad wanaagsan inuu ku sugnaado markii uu guriga joogo ama kaligiis yahay ama bulsho uu ku dhex jiro. ● Sidee ugu fiican loogu barbaarin karaa inuu awood u yeesho inuu xaalad wanaagsan ku sugnaado fasalka dhexdiisa? ● Sidee u xaaqiijin kartaan in caruurtiinu ogaadaan qaanuunka ciyaarta ee fasalka dhexdiiisa ama dugsiga dhexdiisa? ● Sidee ula socon kartaan ka waalid ahaan inaad saameyn ku yeelataan qaanuunka wada joogidda dugsiga? ● Dugsigu siduu u xaqiin karaa idinka ka waalid ahaan inaad ogaataan xadka qaanuunta wada joogidda dugsiga guud ahaan iyo fasalka gaar ahaan? ● Sidee looga hortagi karaa u goynta dugsiga? Yaase la soconaya?
Aragtida balaan waa waajibka waalidka Aragtida aad ka qabto waalidka kale iyo caruurta kale waxay ahaan kartaa mid balaaran. Mala awaal ama khuraafaad, naceyb og go’aan lagu degdego waxay faquuqi karaan caruuro badan. Canugga in laga bedelo fasal ka fasal waxay canug kasta u leedahay cawaacib ama dhibaato badan. Saas darteed ka waalid ahaan waxaad leedihiin mas’uuliyad wadaag in la helo fursad waxqabad, taasoo keenaysa in canuga ku xirnaado fasalka. ● Sidee u caawimi kartaan in la abuuro bii’ad ama xaalad la aqoonsan yahay oo la aqbali karo? ● Haddi arday kasta arbusho waxbaridda, Intee fursad la siin karaa oo loo dulqaadan karaa?
Isgaaarsiinta joogtada ah ee u dhaxeysa dugsiga iyo guriga
Waajibaadka dugsiga iyo wax ka dhihidda waalidka Dugsigu wuxuu ka shaqeeyaa dhowr howlood ee bulsho barbaarinta. Macalimminta fasalka, kooxda macalimiinta iyo dugsiga waqtiga firaaqada waxaa waajib ku ah iney xannaaneeyaan ardayda aan la qabsan karin dugsiga. ● Fursad ma u haysataan inaad ka qayb gashaan howl bulshadeedka fasalka dugsiga ee maalin kasta? Matan haddan ka soo qaadno xaaladaha mashaakilka.
Isla markaasna waa waajib in macalimiintu isku daydo in ardaydu hesho waxbarasho wanaagsan iyo arrimaha la xiriira iyo iney fursad u helaan inaad bartaan mid walba shuruudihiisa. ● Intee rajo ahaan ka qabtaan ka waalid ahaan in laydin sheego qaabka waxbaridda iyo qalaka waxbarashada? ● Ma daneyneysaa inaad keentaan ra’yi la xiriira waxbarashadu waxay ka koobnaan karto?
Habka danabeysan ee isgaarsiinta cusub waxay siisay fursado cusub xiriirka duga iyo guriga. Weli waxa jira meelo horumar leh, lakiin hadda waa cadddatay in laga doodi karo, waxna lala xiriirri karo sidii loo maamuli lahaa xiriirka dugsiga. ● Sidee ugu dhaqsaha badan aad uga rajayn kartaan jawaabtga macalimiinta marka aad kula xiriirto boostada danabeysan ama elektronikada ah? ● Macalinku ma ku kaaftoomi karaa inuu wax kuugu sheego qaabka boostada danabeysan? ● Dugsigu ma ku xisaabtami karaa in guri walba leeyahay kombuyutar? ● Ma lagu xiriiri karaa qaabka moobilka, Gorma, meeqa jeer iyo sidee?
Waalidka laba luqoodka ah
Ka jiridda tartan gaar ah fasalllo badan waxay er in laga soo qayb geliyo qoyska laba luqoodka ah kuwaasoo ilaa hadda si wanaagsan u dhexgelin wada shaqeynta dugsiga iyo waalbka.
Fasal kasta waxaa la doortaa badanaaba 2 ilaa 4 waalid xiriiriye. Waalid xiriiriye waa unug xiriiriye ah oo mid ah maamulka dugsiga, xiriiriyana u ah inta kale ee waalidka iyo macalimiinta. Kaalinta waalid xiriiriye waxay tahay wadashaqeyn ilaa xadna go’aan hoose gaaran.
Dhamaan dugsiyadu waxay diyaariyaan qorshe arday ee qoran. Qorshaha ardaygu wuxuu ka kooban yahay macluumaad ku saabsan natiijada qiimeynta joogtada ah iyo la socodka la go’aamiyay. Qorshada ardeyga waxaa aasaas u ah wada shaqeynta dugsiga iyo waalidka oo ku saabsan inuu ardeygu faa’iido ka helo waxbarashada. Qorshaha ardeygu ku saleysan yahay macluumaad, kuwaasoo uu macalinkuk qasban yahay inuu bundhiga uga dhigo qiimeeynta. Qorshaha ardeyga waxaa shuruud kaliya ah in la qoro macluumaadka micnaha u leh hawsha macalimiinta, waalidka iyo ardeyga si looga socda waxtarka waxbarashada. Qorshada ardeyga waa in loo gudbiyaa waalidka.
● Ma dugsiga kaliyaa ayaa howshiisu tahay in waalidka laba luqoodka ah in laga soo qayb geliyo, kuwa aan si buuxda uga soo qayb geliln bii’ada ama degaanka bulshado ee fasalka? ● Sidee waalidka daanishk a ah ee asalkooda ahayn daanish u taageeri karaan arrimaha bulshada oo la xiriira ardayda laba luqoodka ah kasoo aan qayb weynka ahayn laakin qayb yar ka ah bulshada? iyo sidoo kale waalidka ardaygaas la mid ah?
● Ma jiraa ballamo u aaddan kaalinta waalid xiriiriye iyo howshooda dugsiga ka qabtaan? ● Yaa qaba inaad idinku qaabeeysaan howsha waalid xiriiriye? ● Ma qasabaa in howsha waalid xiriiriye la mid noqoto dan dugsiga
● Sidee u araagtaan idinku qorshayaasha ardeyga Ina la dhexgelin karo wada shaqeynta u dhaxeeysa duga iyo guriga? ● Qasab tahay in qorshayaasha ardeyga in la dhexgeliyo wadashaqeynta dugsiga iyo guriga sidii qalab waxbarasho? ● M bedeli karaa qorshayaasha ardeyga howlaha kale ee la xiriira wadashaqeynta dugsiga iyo guriga? 9
Wada wadalka dugsiga iyo guriga
Wadahadalka dhibka leh
Markii xiriirku uusan guuleysan
Aasaaska wadalka wanaagsan wuxuu yahay furfurnaan iyo kalsooni. Waalidka, macalimiinta oga shaqaalaha barbaarinta dugsiga waqtiga firaaqada waxay dadka wadaaga wadahalka. kuwaasoo mid walba uu aqoon gooni ah u leeyahay canugga.
Wadahadalka u dhaxeeya waalidka iyo dugsiga wuxuu noqon karaa mid dhib badan. Waxaa dhici karta ajendaha inuu yahay caruurtiina. Saa daraadeed, waxa xasaasi u tihiin dabcan eedeeyn. Waxaa aqoon wey u leedihiin caruurtiina waqti dheer ee nolashooda oo dhan, waxana meesha imaan aya dareen adag. Macalimminta, shaqaalaha dugsiga waqtiga firaaqada waxay ardeyga u yaqaaniin arday ahaan, waxay wax ka sheegi karaan horumarika waxbarashadiisa maadoo ahaan iyo sida ay ula shaqeyn karto saaxiibadiis iyo macalimiinta.
Wadashaqeynta wanaagsan ee u dhaxeysa waalidka, ardayda iyo dugsiga waxay micno wey uga fadhisaa canugga liibaantiisa dugsiga. Nasiib wanaagsan waxaa jira xiriir wanaagsan ee u dhaxeeya inta badan waalidka, caruurta iyo dugsigooda. Laakiin dabcan, waxaa dhici kara iney soo baxaan waxaan heshiis lagu ahayn ee la xiriira wada shaqeynta u dhaxeysa waalidka iyo shaqaalaha dugsiga. Ma jiraan mushkilad aan muuqan “madow/caddaan”, waxayna noqon kartaa mid aad logu kala duwan yahay, sidee sheekadani u dhadhameysaa markii uu sheego canuggu ama waalidku ama shaqaalaha. Markasta waa cunugga qoka ku khasaaraya mushkiladadan.
● Qasab ma tahay in hore laydin ku sheego wuxuu ka kooban yahay wadahadalku? ● Yaa go’aaminayaa waxa looga hadlayo wadahadalka? ● Qasab ma tahay inuu ardeygu ka qayb galo wadahadalka? ● Haddey tahay haa, sideebaa ugu wanaagsan ee ardayga loogu diyaargaroobi karaa wadahadalka dugisiga iyo guriga? ● Khasab ma tahay in waalidku ogaado goorta ay jirta wadahadalka u dhaxeeya macalinka iyo ardeyga?
● Sidee dugsigu ugu sameyn karaa xuduud wanaagsan wadahadalkan dhib leh? ● Immise qof ayaa khasab ah ugu yaraan iney ka qayb gasho wadahadalka?
● Sidee looga hortagaa iney mushkiladda sii socoto? ● Muxuu dugsigu ka qaban karaa, waalid ahaan maxaad sameyn kartaa in laga hortago mushkiladan ineysan sii socon?
Cashar - guriyeed – fikradaha kala duwan Waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan cashar guriyeedka in ay khasab tahay in caruurta la soo siiyo cashar-guriyeed. Fikradaha waxay ka jiraan fasalka kasta ee dugsiga aasaasiga ah. Qawaaniinta kuma taal wax la yiraahdo cashar-gurigyeed. Saa darteed, waxay u taal fasall kasta iyo dugsi kasta iney go’aan ka qaadato arrintaas. ● Yaa ka mus’uul ah cashar akhrinta ardayga – ardayga, waalidka, macalimiinta, xarumaha lagu caruurta waqtiga firaaqada? ● Macne ma u leeyahay waalidka cashar akhrintu guriga iyo ka qaybgelinta waalidka ee la xiriira dhigashada canugga ee dugsiga?
Muxuu keenaya mustaqbilku
Maamulka dugsigauwaxuu leeyahy fursad weyn oo saameyn leh haddii saas uu doono. Maamulka dugsiga iyo fikradaha kala duwan shaqalaha barbaarinta, hoggaanka, ardayda iyo waalidka waxay keeni kartaa fikrado cusub iyo horumar.
Dugsiga aasaasiga wuxuu sanadihii ugu dambeeyay ku jirey marxalad isbadal. Shaki kuma jiro inuu sii socon doono sanadaha soo socda asagoo keenayaa isbadal. Waxaa sidoo kale muhiim ah in dugsiga iyo gurga si joogta ah uga doodaan oo ay gorfeeyaan, sidii wada jir ahaan saameeyn ugu yeelan lahaayeen horumarka dugsiga taaso faa’iido u ah caruurta.
● Sidee idinku ka waalid ahaa u taageeri kartaan howsha maamulka dugsiga? ● Sidee dugsiga loogu xaqiin karaa in fikradaha maamulka dugsiga uu waafaqsan yahay fikradaha kooxda waalidiinta, Yaase leh mas’uuliyadda arrintaas?
● Sidee u caawini kartaan, usii wanaajin kartaan sida ugu fiican wadashaqeynta dugsiga iyo guriga mustaqbalka? ● Sidee suuragal ah qofku ugu fakari karaa wadashaqeyn cusub, taasoo u dhiganta tan qoys xadaarad casri leh oo hesha macluumaad og isgaarsiinta taasoo la dheehan karo xaqiiqda astaamaha dugsiga maanta.
Haddii Xarumaha lagu hayo canuga waqtiga firaaqada ay soo jeediyaan cashar-akhrin, dabcan waxaa muhiim ah in shaqaalaha xarumahaas lagu soo daro ka doodidda ku saabsan cahar-akhrinta.
Buugagga warbixinta laga soo qaatay 1. Warbixin OECD (Ururka Horumarinta ee Wadamaha Yurub) ku saabsan dugsiga aasaasiga ah ee Danmark – 2004 Gobol waraaqyo mowduuc leh oo tixan ee maamulka waxbarashada lambarka 5 ee 2004, Wasaaradda Waxbarashada, 2004 2. Warbixinta PISA, www.uvm.dk > warbixinta-pisa 3. Kusoo dhawoow wadashaqeynt. Sidee caruurteena wax uga baran karaa dugisiga? Dugsi iyo Bulsho. Ururka Macalimiinta Danmark iyo Ururka Wadanka deegaamadiisa, 2006 4. www.udsatteboern.net 5. Habdhaqanka caruurta iyo Dhalinyada ee Deegaanka Odense
Børn- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Slotsgade 5 5000 Odense C Telefon 66 13 13 72 e-mail: skole.buf@odense.dk www.odense.dk
Layout og grafik: Christen Tofte Tryk: Schultz Grafisk
Hawshan waxaa soo diyaariyay Qaybta Dugsiga Odense iyadoo wadahadal dhexmaray Hogganka Dusigayada Odense og Ururuka Macalimminta Odense, 2008
Masuuliyadda waalidka iyo kusoo daridda waalidka B u u g y a r